Semalt States nke Blue na-ejikọ ejikọtaghị iru eru dị ka nlegharị anya
Afọ 2020 abịawo nwee ọtụtụ ndozi ndị ọzọ etu esi ịntanetị na igwe nchọta na-arụ ọrụ. Haswa etetawo n'eziokwu na nchọta agafeela njikọ nke acha anụnụ anụnụ na ibe nsonaazụ ọchụchọ. Taa, anyị na-ahụ nsonaazụ ọchụchọ ndị ọzọ na-abịa n'ụdị ihe oyiyi na azịza olu. Nke a na - agwa ndị mmepe web, yana ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ dị ka onwe gị na ilekwasị anya na njikọta naanị na - acha anụnụ anụnụ nwere ike ime ka ị nweta ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ nke kachasị mma, ị ga-elekwasị anya ọ bụghị naanị njikọ gị na-acha anụnụ anụnụ kamakwa ọhụụ gị zuru oke.
Chọpụta ihe ga-eme ka ọhụhụ ọhụhụ zighi ezi ka ọ ga-ada. Nke a bụ ya mere ọtụtụ ndị mmepe weebụ ji elekwasị anya n’inweta ọtụtụ njikọta acha anụnụ anụnụ dị ka ha nwere ike. Mana nke ahụ anaghị ekwe nkwa na weebụsaịtị gị ga-ahụ nke ọma.
Uringchọpụta ọdịiche nke aka gị nwere ike isiri nnukwu ike karịchaa mgbe ị maghị ihe ị na-eme. Ọ bụrụ na ị daa na udi ahụ, echegbula onwe gị karịa, nweta enyemaka ọkachamara site na Semalt. Ma ọ dịghị anyị apụtaghị ọgwụ…
Site na enyemaka ọkachamara site na Semalt na ndị otu anyị dị ebube, ị ga-enweta ọ enjoyụ ọ bụghị naanị njikọ ndị na-acha anụnụ anụnụ, mana visibiliti n'ụdị ọ bụla. Ọrụ anyị ga-ahụ hụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-edepụta maka ọchụchọ, vidiyo na onyonyo onyonyo. Nke ahụ bụ ihe tozuru oke dị ka anya. Ikike maka weebụsaịtị gị site n'ọtụtụ nchọta dịgasị iche bụ ihe na-eme visibiliti dị mkpa.
Anyị ghọtara na nchọta weebụ na-etolite. N'ezie, anyị na-enyocha mmalite ya ruo ọtụtụ afọ ma anyị na-aghọta mmeghachi omume nke ndị ọrụ na mgbanwe ndị a. Taa, igwe ọchụchọ dị ka Google na-enye ndị ọrụ aka ịchọ ihe site na iji ihe onyonyo na vidiyo n'ụzọ nke a pụrụ ịtụkwasị obi na nke ziri ezi na ọ dị n'afọ gara aga.
Ntinye ọhụụ na ntanetịpụta nchọta esiwakwala ezigbo mma na ndị na-achọ nchọpụta agaghị ahụ njikọ na-acha anụnụ anụnụ nke ndị nchọta ọchụchọ ndị gara aga chere na ha niile bara uru. Iji jide n'aka na a hapụghị gị n'ime ájá, ịkwesịrị iji bulie ngwa ọrụ ọhụrụ na atụmatụ ndị sitere na iwepụta ngwa nchọta.
Gịnị bụ visibiliti SEO?
Semalt na-enye gị otu nkọwa zuru oke nke nhụjuanya SEO ị nwere ike ị gafee. Anyị amatabeghị gị nkọwa nke teknụzụ gabigara ókè nke enwere ike itinye dị ka: visibiliti SEO bụ igwe na-egosi gị pasent nke ntanetị nke ebe nrụọrụ weebụ gị na-enweta site na mkpụrụokwu okwu.
Mana n’adịghị ka ihe ị nwere ike ịdị na-eche, a gaghị ịghọta visụ SEO naanị n’ihe gbasara okporo ụzọ azụmaahịa Keywords gị na-enweta. Kama, a na-ekpebi ọhụụ gị nke SEO site na SERPs n'onwe ha ma e jiri ha tụnyere asọmpi gị. Inwere ike ịpị mgbakwunye 3,000 kwa ụbọchị, nke ahụ dịkwa oke mma n'onwe ya. Ma mgbe ị tụlere nke a na asọmpi gị nwere ihe ọkpụkpọ ruru 30,000 kwa ụbọchị, puku mmadụ atọ ka ị bidobeghi.
Ọ bụ n'ọnọdụ dị ka Semalt ndị a nwere ọdịiche niile. Kama ịdabere na data anakọtara site na naanị weebụsaịtị gị, Semalt na-atụnyere ole clicks na-aga na weebụsaịtị asọmpi gị. Anyị achọghị nke ahụ, yabụ ihe anyị na-eme ya iji nyochaa asọmpi ahụ ma gbanwee weebụsaịtị gị ka ịdọrọ karịa nke ndị ahụ pịrị na saịtị gị. Anyị na-eme nke ahụ site na ijide n'aka na ebe nrụọrụ weebụ gị ga-ahụ anya n'agbanyeghị ụdị onye ọrụ na-eji chọọ.
Ka anyị gbatuo ya ntakịrị.
Ihe ngosi 100% SEO bụ ihe kacha mma nwere ike ịme weebụsaịtị gị. Ma, nke a emebebeghi. Ọ bụrụ na nke a ga - eme, ọ ga - apụta na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ntụpọ Organic niile na Google maka enyere mkpụrụ okwu. Ọ ga-apụtakwa na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere atụmatụ niile enwere ike ịpị SERP. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, onye ọ bụla na-pịa weebụsaịtị gị.
N'ụzọ dị ịtụnanya, mgbe ị nwere ihe ngosi 35% SEO, ị ga - echekwa 1 # maka ụdị isiokwu gị. 35% clicks na-anọchite anya ego clicks nke weebụsaịtị gị ga-enweta mgbe ị na-eme ya ka ọ bụrụ ọnụọgụ 1. Ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ọjọọ ị daa na mpụga peeji nke mbụ, a na-atụ anya ịnweta 0% SEO ọhụụ. Ọ bụrụ na ị ga-ada na mpụga peeji abụọ mbụ ahụ, ị nwere ike ịkpọ ambulance weebụsaịtị na ndị ọkachamara ezigbo oge na Semalt iji nyere aka wepụta weebụsaịtị gị.
Gini mere ihu gi ji di oke mkpa?
1. Oke ihe nhụbaanya SEO kacha elu na-eme nchọpụta na idozi nsogbu SEO ngwa ngwa:
Site na ịbelata nchọta ọchụchọ na-agbada, a na-adọrọ uche gị ozugbo na nsogbu mgbanye ahụ na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ ga-adịrị gị mfe ịchọpụta ma ọ bụrụ na mmelite algọridim emetụtara gị ma ọ bụ ntaramahụhụ.
2. Ọ na - enye gị echiche kacha mma na arụmọrụ weebụ gị SEO:
Mgbe ị hụrụ pasent nke ọhụhụ SEO gị, ị maara ole okporo ụzọ ị na-ahapụ na tebụl. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ilekwasị anya na ọnụọgụ ụzụ nke okporo ụzọ SEO ị na-emepụta, ị nwere ike nwee afọ ojuju na-amaghị ọnụọgụ okporo ụzọ. Ọ bụrụ n ’isonye n’agbụrụ atọ, i nwere ike nwee afọ ojuju ịbịa nke atọ n’ihi na nọmba atọ adịghị njọ. Ma ọ bụrụ n’ịile anya na ọnụọgụ ndị agbụrụ ahụ, ị ga-ahụ na ị mere ihe ọjọọ, jọrọ njọ na ị mechara.
3. Ọhụụ SEO na-atụnyere nsonaazụ gị, si otú a na-eduzi gị nke ọma. Site na nyocha SEO mgbe niile, ị nwere ike nweta nsonaazụ dịka:
Isiokwu # 1, 500 nkp
Na isiokwu # 2, 300 clicks.
Automatically ga - eche na isiokwu # 1 na - eme nke ọma karịa isiokwu # 2, mana nke ahụ abụghịcha eziokwu.
Ọhụụ SEO na-enye gị pasent nke ọnụ ọgụgụ nke clicks na-emegide ọnụ ọgụgụ nke clicks na isiokwu ahụ. Nwere ike ịchọpụta na isiokwu gị # 1 dị na 3% ebe isiokwu gị # 2 dị na 10%. Nsonaazụ a na - enyere gị aka imeziwanye isiokwu gị nke chọrọ mmezi, na - enyere weebụsaịtị gị aka ito eto.
Ọhụụ SEO abụghị okporo ụzọ SEO. Gbalịa ka ị ghara ịgbaghara abụọ a.
N'ịghọta ihe kpatara ndị ọrụ ntanetị ga-eji lekwasị anya na nhụjuanya ọ bụghị naanị njikọ ndị na-acha anụnụ anụnụ, Semalt edepụtara mpaghara ndị bụ isi ebe Nzipụta na-akụ njikọ njikọta na-acha anụnụ anụnụ.
Enweghị ajụjụ ọ bụla chọrọ
Ihe ọhụrụ dị na Google akpọrọ "Google Discover" bu n'uche inye ndị ọrụ ịntanetị ihe ha na-achọ tupu ha pịnye ya. Ezubere nke a iji yie faili ntanetị mgbasa ozi. Nri a bụ ihe ịtụnanya. Ma nke a niile bụ nnukwu data Google nwere maka ihe ndị mmadụ kacha achọ. Ihe omume a dikwa oke nma nihi na o gosiputara ozi, onyonyo, na vidiyo chikotara site na nyocha ọchụchọ gi na ihe Google ndi ozo.
Achọghị ihu akwụkwọ ga-enye
Ihe omume a na - emetụta arụmọrụ nke olu olu Google. Nchọpụta olu na - aghọ nnukwu akụkụ nke otu ndị ọrụ si achọ ihe ọmụma taa. N'ọgbọ nke na-achọ ụzọ ngwa ngwa na obere nrụgide iji mee ihe mgbochi, ịgaghị enwe ihe ijuanya na ihe karịrị 20% nke ndị na-eji ekwentị na-ahọrọ ugbu a iji nhọrọ ọchụchọ olu. Ekwesighi ilebara ya anya dika ihe ozo kama obu eziokwu anyi.
Taa, anyị nwere ngwaọrụ enweghị ihu akwụkwọ dịka Google Home na Amazon Echo, nke ga-ekwupụta naanị otu nsonaazụ ọchụchọ maka onye ọrụ. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị elekwasịghị anya na visibul na naanị njikọ na-acha anụnụ anụnụ, ọ gaghị enweta visibiliti na nchọta olu.
Maka nyocha olu na ngwaọrụ nwere enyo, Google ka na-ekwupụta nhọrọ ọ chere na ọ kachasị mma mana ọ ka na-egosi nsonaazụ ndị ọzọ nwere njikọ na-acha anụnụ anụnụ. Elydabere na nke a ezughi ezu n'ihi na ọtụtụ oge, onye ọrụ na-ahọrọ ịnọdụ ala ma gee ntị tupu ịtụle nsonaazụ ọ bụla ọzọ na-apụta.
Enweghị nsonaazụ ederede
Tụkwasara anyị obi mgbe anyị kwuru nchọnchọ onyonyo bụ atụmatụ dị mma maka weebụsaịtị na ndị ọrụ. Tupu ịnakwere teknụzụ a site na ngwa nchọta, ndị ọrụ kwesịrị iche ogologo oge tupu ha akọwaa ebe ma ọ bụ ngwaahịa nke hachọrọ ozi. Site na iji ihe onyonyo, nchọta abụrụla ihe dị mfe. Akụkụ a mara mma maka ịchọ ngwaahịa ma ọ bụ ebe, mana ọ na-achọkwa ederede maka eserese.